Firaisamonina sivily ho mpikamban’ny HCDDED : tafatsangana ny komity vaovao hikarakara fifidianana, saingy… | NewsMada
Firaisamonina sivily ho mpikamban’ny HCDDED : tafatsangana ny komity vaovao hikarakara fifidianana, saingy…
Tafatsangana ny komity manokana vaovao eo anivon’ny firaisamonina, teny Nanisana, afakomaly, araka ny fampiantsoan’ny fivoriana nataon’ny minisiteran’ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrimpanjakana. Amin’ny fikarakarana fifidianana izay ho solontenan’ny firaisamonina sivily ao amin’ny Filankevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna (HCDDED) izany.
Avy amin’ny hetsika Rohy avokoa ny fikambanana efatra amin’ny komity vaovao, izay nampiantso fivoriana amin’ny 6 avrily ho avy izao. Hodinihina amin’izany ny amin’ny fanatanterahana ny fifidianana: ny fifantenana kandidà, ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy… Hanao ahoana?
Misy ireo fikambanana eo anivon’ny firaisamonina sivily tsy manaiky hoe avy amin’ny hetsika Rohy avokoa ireo mpikamban’ny komity hikarakara ny fifidianana. Hahay hifandamina ny amin’izany ve ny samy firaisamonina sivily?
Mitatao hatrany ny fampitandreman’ny minisitera
Ao indray ny manahy fa mbola mitatao hatrany ny fampitandreman’ny minisiteran’ny Serasera: raha tsy mahay mifandamina ny samy firaisamonina sivily, handray andraikitra ny minisitera. Nefa tsy tokony hidiran’ny fanjakana ny raharaha tokantranon’ny samy firaisamonina sivily.
Milaza ny eo anivon’ny minisitera fa sarotra ny hoe mahasolo tena firaisamonina sivily manerana ny Nosy ny olona hofidina, satria tsy mbola mipetraka ny rafitra amin’ny sata iombonana. Ny azo antoka: avy amin’ny firaisamonina sivily izy.
Ilaina ny fanafainganana ny fametrahana ny sata iombonan’ny firaisamonina sivily malagasy. Hahafahan’ny fanjakana mifandray aminy izany, mamaritra ny hoe: iza marina ny firaisamonina sivily, inona ny andraikitr’izy ireo, ny zony, ny tokony hataony eto amin’ny firenena…?